पूर्वप्रधानमन्त्री माधव नेपालको घरमुनिको बाटो
शिव सत्याल, घनेन्द्र ओझा काठमाडौं, ९ मंसिर
आज हामी पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको घरमुनिको बाटो देखाउन लैजाँदै छाैं । उनी कोटेश्वर–च्यासल जोड्ने झोलुंगे पुलनजिकै काठमाडौं महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३२ मा बस्छन् ।
बागमती र मनहरा नदी दोभानदेखि बालकुमारी पुलसम्मको करिब डेढ किलोमिटर बाटो बन्न लागेको ३ वर्ष भयो । यो बाटो अझै बनिसकेको छैन । पानी पर्दा गजगज हिलो र पानी नपर्दा कुहिरीमण्डल धूलो उड्ने यो बाटो अहिले कस्तो रहेछ भनेर हामी बागमती–मनोहरा दोभानदेखि हेर्दै हिंँड्यौं ।
बुद्धनगरतिरबाट जाने पुलदेखि नै बागमती कोरिडोर बन्द छ । तर, बाटो बन्द छ भन्ने सूचना कतै छैन । नियमित हिंँड्नेहरूलाई बाटो बन्द छ भन्ने थाहा छ । त्यसैले उनीहरू पुल तर्नेबित्तिकै भित्रतिरको बाटो लाग्छन् ।
थाहा नपाउनेहरू अलिक अगाडि पुगेपछि घुम्तीनजिकैबाट फर्कनै पर्छ । किनभने घुम्तीभन्दा केही अगाडिदेखि सडकमा थुपारिएको गिटी र बालुवाले गाडी जान सक्दैनन् । र, सडक यसरी बन्द भएको उज्यालोमा पनि देखिँदैन । घुम्तीले छेक्छ ।
केही अगाडि बढेपछि कोटेश्वर-च्यासल जोड्ने पक्की पुल भेटिन्छ । पुलबाट गाडी ओहोरदोहोर गर्छन् । बुद्धनगरतिरबाट पुल तरेर भित्री बाटो हुँदै आएका सवारीसाधन पनि यही पुलबाट च्यासलतिर लाग्छन् ।
च्यासलतिर नलागी गाडीहरू बालकुमारी पुलतिर लागे भने नसोचेको झन्झट व्यहोर्नुपर्छ । अलिक अगाडि पुगेपछि बाटो बन्द छ । बाटो बन्द छ भन्ने सूचना पुलछेउमा राखिएको छैन । अगाडि त डरलाग्दो हिलो भएको ‘क्षतविक्षत’ सडक छ ।
पैदल यात्रासम्म जेनतेन गर्न सकिने सो सडकै सडक केही अगाडि बढेपछि दोबाटो भेटिन्छ । दोबाटोदेखि केही अगाडिसम्म गाडी गुड्न सक्ने अवस्थाको बाटो छ, जहाँबाट गाडी गुडिरहेका हुन्छन् ।
त्यही दोबाटो नजिकै प्रहरी बिट छ । प्रहरी विटको कक्षमा रातो रङको बुट्टे सोफा राखिएको छ । सोफाभरि धूलैधूलो छ । सोफाछेउमा केही कागजपत्रसहित एउटा नोटबुक राखिएको टेबुल छ । टेबुलभरि त्यस्तै धूलो । नोटबुक पनि धुलाम्यै ।
प्रहरी बिटभित्र पसेपछि हामीले त्यहाँका हवल्दार रामेश्वर नेपालीलाई धूलोबारे केही सोध्न खोज्याैं ।
‘बाटो बन्दै छ, धुलो कस्तो छ भनेर मैले के भनूँ, रूखका पात हेर्नुस्, पातहरू हरिया हुनुपर्ने होइन र ? सबै सेताम्ये छन्,’ हवल्दार रामेश्वर नेपालीले यति भनेर आफ्नो कुरा सिध्याए । उनले ‘बाटो बन्दै छ’ भनेर दिएको प्रतिक्रिया निर्माण हुँदै छ भन्ने हो कि बन्द छ भन्ने होला ?
प्रहरी बिटबाट निस्कियौं, अलिकति अगाडि झोलुंगे पुल छ । यो पुलले कोटेश्वर–च्यासल जोड्छ । पुलनजिकै मास्तिरबाट गाडी आउने अर्काे बाटो छ ।
पुलभन्दा केही अगाडि बढेपछि मूल सडकमा गज्जबको जरुवा भेटिन्छ । माफ गर्नुहोला, जरुवा पानी होइन, मूल सडकमा ढल फुटेर निस्किएको फोहोर हो यो ।
ढलको पानी निस्किएका कारण सो ठाउँ हिलाम्य छ । त्यहींनेर खाल्डाखुल्डी पनि । एकातिर हिलो, अर्काेतिर खाल्डा । मोटसाइकल चालकका लागि यो त सबैभन्दा सास्तीको अवस्था नै भयो । गाडी पनि कठिनले पार गर्छन्, पैदल यात्रुलाई पनि यस्तै सास्ती दिन्छ यो ठाउँले ।
यो ढल बग्ने खाल्डो पार गर्नेबित्तिकै मास्तिरबाट हिँड्ने एउटा बाटो छ । हो, त्यही बाटोभन्दा केही अगाडि हो पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको घर । पख्नुहोस्, माधव नेपालको घरतिर जानुपर्ने काम छैन । हामी सडक नै हेरौं ।
अघि हामीले ढल बग्ने खाल्डोको कुरा गरेका थियौं । त्यही खाल्डोभन्दा केही अगाडि दोबाटो भेटिन्छ । त्यो ठाउँ दोबाटो हो भन्ने पहिलो पटक गएर हेर्नेलाई थाहा हुँदैन । नियमित यात्रा गर्ने र स्थानीयलाई मात्रै थाहा हुन्छ ।
त्यही दोबाटोको ५ मिटरजति तल खोलातिर अंग्रेजीमा ‘कसन’ लेखिएको सूचना बोर्ड छ । त्यो सूचना बोर्ड देख्न खोलातिर फर्कनैपर्छ । अंग्रेजीमा ‘कसन’ लेखिएको सावधान भन्न खोजिएको हो । ‘कसन’ भनेको खतरा हो भनेर नबुझ्नेले के गर्ने होला ? ‘कसन’को बोर्डले ‘सावधान ! बाटो बन्द छ’ भन्ने जानकारी दिन खोजिएको होला । तर, सडकभन्दा करिब ५ मिटर तल, खोलातिर, झाडीमा ‘कसन’को बोर्ड राख्ने जाँगर कसलाई किन चलेको होला ?
छोड्दिनस् ‘कसन’को चक्कर पनि । अगाडि बढाैं ।
अलिक अगाडि एउटा सटरमा चिया-खाजा पाइने पसल छ । पसलको बाहिर मात्रै होइन्, भित्रसम्मै धूलोले ढपक्कै ढाकिएको छ । पसलको टेवलभरि धूलैधूलो । भयो, यो धूलोको कुरा पनि कति गर्नु !
चिया पसलबाट केही अगाडि बढेपछि एउटा ग्रिल उद्योग छ । सडकबाटै घ्यार्र–घ्यार्र आवाज आइरहेको छ । सडकमा सामान बोक्ने एउटा सानो गाडी छ । त्यो गाडीमा फर्निचरका सामान लोड गरिँदै छ । गाडी चालकका अनुसार सामान कुनै कलेजमा लगिँदै छ ।
त्यो गाडी बालकुमारी पुलतिर जान सक्दैन किनभने बाटो बन्द छ । गाडी झोलुंगे पुलतिर फर्कने हो । यस्ता गाडीले धकेलेर ‘कसन’ झाडीमा पुगेको हुन सक्छ ।
हामी अगाडि बढ्दै छाैं । यो ठाउँमा गाडी हिँड्न सक्दैनन् । खोलातिर पर्खाल लगाउने काम भइरहेको छ । पर्खाल लगाएर बालकुमारी पुलनजिकैको नर्सरीसम्म पुर्‍याइएको छ ।
बालकुमारी पुलमुनिबाट गाडी ओहोरदोहोर गर्छन् । यसरी गुड्ने गाडीहरू कोरिडोर छोडेर भित्रको बाटो तय गर्न बाध्य हुन्छन् । त्यो दोबाटोमा सूचना बोर्ड छ तर धूलोले देखिंँदैन ।
हामी बाकुमारी पुलमा पुग्यौं । बाटोको कथा सकियो । यो बाटो बनाउन किन ढिला भयो ? को हो ठेकेदार ? समयमै बनाउन स्थानीयले कस्तो प्रयास गरेका छन् भन्नेजस्ता विषयमा फेरि कुरा गरौंला है !
अँ ! एउटा कुरा छुटेछ । बालकुमारी पुलमुनि मनोहरा खोला बग्छ । खोला बग्ने ठाउँमा ढलान गरिएको छ । पानी बग्ने ठाउँमा किन ढलान गरिएको होला ? जनतालाई सेवा दिन कि खर्च सक्न ?
प्रकाशित मिति: सोमबार, ९ मंसिर २०७६, १३:३१:००
शिव सत्याल, घनेन्द्र ओझा